Kaominina Ambonivohitr’i Betafo Tafapetraka ofisialy ny ben’ny tanàna Livasoa
Tontosa soa aman-tsara tamin’ny fomba ofisialy ny alarobia 29 janoary lasa teo ny fametrahana tamin’ny fomba ofisialy ny ben’ny tanànan’ny Kaominina ambonivohitr’i Betafo Randriatahinamalala Livasoa Moratiavina.
Tontosa soa aman-tsara ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny ben’ny tanàna teo aloha, ka teo ambany fiahian’ny lehiben’ny distrikan’i Betafo ny lanonana ara-panjakana. Kandida tamin’ny anaran’ny Firaisankinan’i Betafo, ary notohanan’ny antoko Tia Tanindrazana ny tenany tamin’ny fifidianana. Noho izany indrindra dia tonga nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana ara-panjakana ny Birao politikan’ny antoko notarihin’ny Filoha nasionaly Atoa Tahina Razafinjoelina sy ny Sekretera Jeneraly Atoa Schall Ramanantsoa. Fanamby goavana ny tsy hampitsanga-menatra an’i Betafo amin’ny lafiny fampandrosoana, ary vonona ny hifanome tànana amin’izany herivelona rehetra ao an-toerana sy ny mpira-miombon’antoka samihafa. Hanao izay ho afany amin’ny fanatanterahana ireo vinam-pampandrosoana nanomezana toky ny vahoaka ny antoko Tia Tanindrazana sy ity ben’ny tanàna tanora ao anatin’ny heriny tanteraka ity. Tanjona ny tsy hampitsanga-menatra ny Kaominina Ambonivohitr’i Betafo.